03/03/2011 : “Attentat 2” : raikitra indray ny sinema | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
03/03/2011 : “Attentat 2” : raikitra indray ny sinema
Nanaovana dridrangilo manerana ny haino amanjery eto an-drenivohitra indray androany hariva fa nisy nikasa hamono I TGV. Araky nny fitantaran’ireo akaiky azy tamin’ny mpanao gazety dia nisy fipoahana lehibe teo amin’ny lalana manamorona ny “marais Masay” raha iny hamonjy fodiana iny I Andry Rajoelina. Araky ny zavatra hitan’ny mpanao gazety teny an-toerana sy naseho tamin’ny fahitalavitra rehetra dia nisy “fil” 150 metatra nampifandraisana ilay “baomba” sy ny “détonateur” izay bateri-na moto no nampiasaina araky ny voalaza ihany.
Dia ahoana indray ny tohiny ?
Rehefa nanontanian’ny mpanao gazety ny praiminisitry ny Hat dia nanambara fa tsy maintsy hita ny tompon’andraikitra amin’izao asa fampihorohoroana izao. Raha namaly ny fanontanian’ny mpanao gazety vehivavy “tena akaiky” ny HAT moa ny tenany dia nanambara fa “terrorisme politique izao ary acte d’intimidation envers le président indrindra taorian’ny fanambarana omaly ireny”. Io hariva io dia tsy azo naleha tanteraka ny teny amin’iny faritra nisian’ny zava-nitranga iny. Ary nanantitra ny “Aide de camp” an’I TGV fa nahita olona iray niaraka tamin’ny zazakely tamin’ny fotoana nandalovan’ny fiara nitondra azy ireo ka nisian’ny fipoahana.
Matahotra mafy angaha ?
Tsy misy tsy mahatadidy angamba fa rehefa tonga amin’ny tsy azo idovirana toy izao ny olana politika hoan’ny HAT dia isan’ny fahaizana manokana an’ny mpampandihy ny “création d’événements”. Heritaona ohatr’izao mihitsy no nolazaina fa nisy nitifitra teny amin’ny digue Andranomena ny fiara nitondra azy. Ary efa tamin’ny taona 2009 ny tenany no mampiasa ny paikady “mampalahelo” (auto-victimisation)rehefa tsy manana ady hevitra hapetraka intsony amin’ny politika avolenta satria tsy takany izany. Ilay mpanao gazety vehivay ao amin’ny haino amanjeriny aloha dia tsapa nalahelo tokoa raha nny feony nametraka fanontaniana. Ankoatr’izay, toa zary “filma efa nandeha” sis any zava-misy hoan’ny olona mpitazana.
Azo antoka aloha fa hampifandraisina amin’ny ankolafy telo indray izao sinema izao. Efa izay rahateo no nambaran’I Camille Vital tamin’ny resaka nifanaovany tamin’ny mpanao gazety. Ny mahagaga fotsiny : olona mametraka taroby amin’ny 150 metatra dia tsy hitan’ny mpandalo sy ny GP manao “piquets” miandry ny fandalovan’ ity DJ nanongam-panjakana ity milaza ho filoham-pirenena ity